यो इस्लाम संग गर्न छ | Apg29
यसरी यो गरेको कार्यहरू मिलाउँछ। Louisa र Maren हालै लिबिया मा 34 beheaded मसीहीहरूसित एउटा ठूलो गम्भीर फेला, अद्वितीय छैनन्।
हामी किन इस्लाम बारेमा थप जान्न आवश्यक? ब्याज सानो छ तर सामान्य आवश्यकता मानिसहरू आफ्नो ज्ञान सुधार गर्न किन कारणहरू धेरै छन्।
सरासर आकार एउटा कारण छ, इस्लाम ख्रीष्टियन पछि इतिहास दोस्रो ठूलो धर्म हो। लगभग 1.6 अरब मान्छे, संसारको जनसंख्याको एक पाँचौं भन्दा मुस्लिम, वृद्धि जारी एक नम्बर, मानिसहरू आफूलाई विश्वास गर्न छनौट छैन किनभने सूर्य एक मड्डी स्रोतमा हरेक साँझ सेट (कुरान 18:84), तर किनभने अज्ञानता को, उच्च जन्म दर र माइग्रेसन छोड्न चाहनेहरूलाई लागि मृत्यु दण्ड को खतरा।
स्वीडेन मा मुस्लिम र अन्य युरोपेली देशहरूको संख्या हाल को वर्ष मा र हामीलाई वरिपरि धेरै मानिसहरू नै मूल साझेदारी विस्फोट भएको छ, यसलाई उनीहरूले के प्रतिनिधित्व थाहा महत्त्वपूर्ण छ।
को कुरान र हदीस भन्छ को अज्ञानता पनि इस्लाम भित्र ठूलो छ। मुस्लिम बहुमत इस्लाम मात्र अकाट्य सत्य हो भन्ने विश्वास गर्छन्, त्यसपछि यो तिनीहरूले सबै जीवन भनिएको छ के छ। एकै समयमा, तिनीहरूले मुसलमान स्रोतहरू केरकार गर्न सिक्न।
इस्लाम रूपान्तरित गर्ने मुस्लिम प्रायजसो गलत जानकारी खुवाउनुभयो गरिएको देखि यस गरेको छ। तिनीहरू बाइबल अध्ययन पछि परिवर्तित गर्ने मानिसहरू अत्यन्तै दुर्लभ छन्।
"यो अल्लाह र उहाँको दूत यो कुरा मा नि: शुल्क विकल्प छ, निर्णय गर्दा एउटा कुरा विश्वासी मानिस वा विश्वासी महिला, छैन befits, र त्यो अल्लाह र उहाँको प्रेरित, प्रकट त्रुटि कैद छ आज्ञा पालन गर्दैन गर्ने।" (कुरान 33 : 36)
"परमेश्वरको प्रेरित तिमीहरू अब अल्लाह र अन्तिम दिन मा आशा गर्ने, र बारम्बार परमेश्वरको आह्वान उहाँलाई लागि राम्रो उदाहरण प्राप्त गरेका छौं।" (कुरान 33:21)
इस्लाम बाइबल सामग्रीले distorts मसीही ज्ञान लागि यथासक्य महत्व छ। हामी हाम्रो मुसलमान सँगी नागरिक सुसमाचार साझेदारी गर्दा, हामी तिनीहरू हामी व्यक्त सन्देश गलत अर्थ लगाउनु कसरी जान्नु आवश्यक छ। मसीहीहरूले येशूको परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर उदाहरणका लागि तर्क। एक मुसलमान लागि, यो परमेश्वरको एक महिला संग सेक्स गरेको भनेर र अनिवार्य एक छोरा थिए अर्थ, त्यसपछि कि कुरान ठ्याक्कै के सिकाउँछ छ।
"पक्कै पनि स्वर्ग र पृथ्वी छोराछोरीलाई छ कसरी हुनेछ, त्यसपछि उहाँले कुनै पत्नी छ?" (कुरान 6: 101)
एउटै त्रिएकको साँचो हो। कुनै मसीही कहिल्यै इतिहास विश्वास वा त्रिएक परमेश्वर, येशू र मरियम समावेश भनेर यसो त छ। यो सिद्धान्त मुस्लिम सिकाउन यो हामी विश्वास के हो भनेर कुरान द्वारा विकृत भएको छ।
"हुँदा परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, येशू, मरियम को छोरा, तिमी मानिसहरूलाई भन्नुभयो:" म र परमेश्वरको सट्टा देवताहरूको रूपमा मेरो आमा लिनुहोस्! (कुरान 5: 116) ""
मसीही विश्वासको धेरै सार येशूको मृत्यु, पुनरुत्थान र देवत्व छ। इस्लाम मात्र होइन हामी सामान्यतया मुस्लिम यी आक्रमण गर्न प्रशिक्षित गर्दा रक्षा गर्न, सबै यो इनकार, तर यो यी धार्मिक शिक्षाले छ।
"किनभने तिनीहरूले थियो छैन, अनि भन्दै हामी पक्कै पनि ख्रीष्ट येशूको मरियम, परमेश्वरको दूत छोरा मारिए, तर तिनीहरूले न तिनलाई मारे न त क्रूसमा छन्, तर तिनीहरू त केवल तिनीहरूलाई देखिन्थ्यो, र, यो बारेमा तर्क गर्नेहरूलाई साँच्चै अनिश्चित भएको छ पालन ​​गर्न उसलाई कुनै ज्ञान, तर केवल अनुमानको; तिनीहरूले वास्तविक जीवनमा उहाँलाई मारे छैन, तर परमेश्वरले परमेश्वरको शक्तिशाली र बुद्धिमानी हो, बिउँताउनुभयो। (कुरान 4: 156) "
जहाँ अज्ञानता सबैभन्दा ठूलो छ
देशहरूमा जहाँ अज्ञानता जहाँ इस्लाम सर्वश्रेष्ठ thrives, सबैभन्दा ठूलो छ। स्वीडेन यो एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। सामान्य अज्ञानता मिडिया, राजनीतिज्ञ र मुस्लिम प्रचारकहरूको केहि भन्न सक्छौं बनाउँछ र मान्छे तिनीहरूलाई विश्वास गर्छन्।
यो उदाहरण को असंख्य पटक हामी सुन्न आक्रमण गर्न इस्लाम संग गर्न केही छ अल्लाह को नाम मा अर्को घातक आतंकवादी हमला पछि कसैले इमाम छन्। हामी अक्सर उदाहरणका लागि, मुहम्मद एक महिला सही लडाकु थियो, कि पश्चिम हामी महिला को स्वतन्त्रता अभिवादन रूपमा सुन्न। यी झूट हो, तर मानिसहरूले यसलाई विश्वास।
दुई जवान मानिसहरू beheaded
हामी Louisa Vester Villager Jespersen र Maren Ueland उदाहरण, दुई जवान महिला brutally छुट्टी मा मोरक्को beheaded थिए सक्नुहुन्छ। को हत्या इस्लाम र राज्य SVT के छैन भन्ने दाबी एक स्मारक समारोह मा कसैले बिजुली गर्ने छेस्कनी छिटो छ। यो सबै कुरा छ र केवल इस्लाम संग गर्न।
हत्या जो धेरै भन्दै एक टोली प्रयास थियो भनेर याद गर्नुहोस्। म तिनीहरूलाई, हामी दुई पर्यटक मा आउनेछ brutally हलाल वध सबै गोली भनेर र सामाजिक मिडियामा पोस्ट तिनीहरूले मलाई लक प्राप्त गर्न निश्चित गरे थिए मेरा साथीहरू भने थियो। के हत्याराहरूलाई कागजातहरू मिलाउँछ? को कुरान र hadiths किनभने!
"तिनीहरूको तलब, परमेश्वर र उहाँको प्रेरित लड्न जो, र पृथ्वी, गर्यौ मा बदमासी instigate तिनीहरूले मारे केवल कि वा क्रूसमा, वा आफ्नो हातमा छ र खुट्टा crosswise severed, वा तिनीहरूले देशबाट banished भनेर। यो यस जीवनमा आफ्नो निरादर गर्यौ, र जीवन मा उनलाई एक भयानक सजाय पर्खिरहेको आउन। "(कुरान 5:37)
छ गर्न निष्ठा
के दुई पर्यटक को अस्पष्ट ठेस संग गर्न "लडिरहेका परमेश्वर र उहाँको प्रेरित र पृथ्वीमा बदमासी instigate" छ? Louisa र Marens हत्यारा छ गर्न निष्ठा sworn छ। नर्वे र डेनमार्क दुवै भनेर लड्न विभिन्न तरिकामा योगदान वैश्विक गठबन्धनको को भाग हो। Louisa र Maren कर तिर्नुपर्ने र माथि अपराध को यसरी दोषी हो विरुद्ध लडाई आर्थिक सहायता।
मुहम्मद आफूलाई अनुसार यो कि समर्थन प्राप्त र सैनिकहरू सुसज्जित सिपाहीहरूले आफूलाई जस्तै भुक्तानी त। यो अल्लाह को कारण रूपमा लागि धेरै छ।
(Sunan इब्न Majah 2758) "अल्लाह को कारण एक योद्धा पोख्त हुन्छौं जसले आफ्नो जस्तै एक इनाम, यो slightest मा योद्धा गरेको इनाम देखि घट भन्ने बिना प्राप्त हुनेछ।"
34 संग ठूलो गम्भीर मसीहीहरूले beheaded
हामी इस्लाम को beheading संघ प्रतीकात्मक रूप मा शैतानको छ भनेर थाह छ। येशूले इलाकाका छ र चर्च शरीर छ र यसलाई शैतानले तिनीहरूलाई बीच भेद गर्न चाहन्छ कि स्पष्ट छ।
येशूको फिर्ती, Stefan Eliasson को अघिबाटै जान्ने काम मा
Apg29.nu भन्दा अन्य गरेको छन् लेख र भिडियो ब्लग साइट साझेदारी छैन भनेर दृश्य हुन सक्छन्।
Vecka 29, tisdag 16 juli 2019 kl. 18:33